Square Cash kọwakwuru Bitcoin trading atụmatụ niile ọrụ - Blockchain News
Square Cash kọwakwuru Bitcoin trading atụmatụ niile ọrụ
Square nke ọgbọ-ọgbọ ugwo ngwa akpọ Square Cash, nke bụ a Bitcoin trading ngwa, dị ugbu a n'ihi niile ọrụ (ma e wezụga ndị na New York, Georgia, Hawaii, ma ọ bụ Wyoming). Ọrụ nwere ike ịzụta ma na-ere bitcoin iji ihe ọ bụla ugwo usoro ha mmasị ka ngwa.
Ọrụ nwere ike ịzụta ruo $10,000 uru nke Bitcoin a izu nakwa dị ka ego na ọ na ndị ọzọ na adreesị.
Onye ọrụ Bitcoin na-enwe site Square, ọwọrọde ha na-kegide na akaụntụ gị na-adịghị ngwaọrụ. Ka a na-adịchaghị mma maka nche ya bụ maa mma maka nkezi ọrụ onye nwere ike ichefu ha paswọọdụ ma ọ bụ ida ha na ekwentị na ka na-enwe ike na-agbake ha ego
Na a kwuru nyere TechCrunch ụlọ ọrụ kwuru:
"Cash App enye ndị mmadụ na ohere ka ego usoro, na ahịa anyị egosiwo mmasị a mfe, ijekwuru ụzọ zụta na-ere Bitcoin. Site anyị na pilot, anyị mụtara ọtụtụ ihe banyere otú anyị nwere ike ime ka ahụmahụ a ngwa ngwa na mfe anyị na-enwe obi ụtọ mụbaa ya nnweta. "- Square ọnụ na-ekwuchitere
sec nwere "ọtụtụ" nke nnyocha na-emeghe na cryptocurrency ohere
G20 Watchdog agaghị ike ọhụrụ ụkpụrụ maka cryptocurrencies
Previous Post:Netherlands Finance Minister: Bitcoin na-achọ a ule maka ihu ọma
Eduga Thai anoghi n'ulo oba na-akwado blockchain ikpo okwu digitize contracts
Bitfury emepe Mining Datacenter na Norway
The Russian Central Bank na-eme ka a mkpebi ikpeazụ on cryptocurrency trading
US ahia regulator malite blockchain arụ ọrụ otu
Northern Trust na PwC ga-eji blockchain iji mee ngwangwa audits
Brazil mgbanwe Foxbit bụ ka ala, na-enye ohere withdrawals
Ntakịrị nke nchebe Etinye na cryptocurrencies jikọtara elu ize ndụ,
bitcoin na ngọngọ yinye BTC ígwé ojii na Ngwuputa Coinbase kaadị cryptocurrencies cryptocurrency ethereum mgbanwe hardfork ico litecoin ma egwuputa Ngwuputa netwọk ọhụrụ ozi protocol ripple soro telegram iriba-ama tokens trading wallet